Item No .: MS-881W-Blue
Jiro halo manga mitarika 7 mirefy ho an'ny jeep wrangler jk, tonga miaraka amina haavo 3620LM avo sy haavo ambany 2480LM, halo drl manga sy signal amber turn, tahan'ny rano tsy miova IP67, androm-piainana maharitra mandritra ny 50000 ora.
Ireo dia nitondra jiro manga halo jeep wrangler tonga miaraka amin'ny mari-pana miloko 6500K izay mikatona amin'ny tara-pahazavana voajanahary mba hanatsarana ny fahazavan'ny fijery mitondra fiara sy ny fampiononana mitondra fiara. Fampisehoana tantera-drano sy tsy misy vovoka tsara. Trano fonenana maharitra miaraka amina heat sink. Ny haavon'ny angovo avo sy ny hamafin'ny hazavana hanitarana ny tsipika fahitana, hampitombo ny fepetra mitondra fiara azo antoka ho anao. Ny jironay halo manga ho an'ny jeep wrangler jk dia manana fanjifana ambany, mahomby, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana. Herinaratra matanjaka on / off valiny, androm-piainana maharitra mihoatra ny 50000 ora. Kitiho sy milalao, fametrahana mora, mazàna mandany 15 minitra eo ho eo amin'ny fametrahana azy. Mety amin'ny Jeep Wrangler JK TJ LJ CJ.
Famaritana ny jiro manga manga ho an'ny Jeep Wrangler JK
Halo Color Filazana fiviliana drl manga sy amber